Ahoana ny fomba fitateram-bahoaka any Ankara mandritra ny 4 andro? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ahoana ny fomba fitateram-bahoaka any Ankara mandritra ny 4 andro?
22 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, TORKIA
Ahoana ny fomba hisian'ny fitateram-bahoaka eny Ankara mandritra ny andro
Mifanaraka amin'ny fepetra raisina manohitra ny valan'aretina coronavirus (Covid-19), ny fampiharana ny fantsom-pivoriana dia ampiharina amin'ny 23-26 Mey 2020, araka ny fanapahan-kevitry ny ANKARA GOVERNOR's UMUMI HIFZISSIHHA, daty 21.05.2020 ary laharana 2020/37, miaraka amin'ireo bus ny EGO General Director. Eo anelanelan'ny ora 23-2020 amin'ny asabotsy 07.00 Mey 20.00, izay andro bisin'ny herinandro; Amin'ny andro voalohany sy faharoa sy ny Fotoam-pankalazana Ramadany, 24-25-26 Mey 2020, hatolotra ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olom-pirenena hafa izay voahilika amin'ny làlamby eo anelanelan'ny 07.00-09.00 sy 16.30-20.00.
Ankoatr'izay, ny fanovana ny fotoana fandaozana sy ny làlan'ny bus EGO, izay manohy manompo amin'ny andalana 440 ho fampiharana, dia nohavaozina tao anatin'ny faritry ny KARAR. Hita ao amin'ny fampiharana finday EGO CEP sy ao amin'ny tranokalan'ny Corporation (www.ego.gov.t dia) ao amin'ny fizarana "TRANSPORTATION IN THE CITY / System Information Web".
Saingy, noho ny "Fetin'ny Ramadany" eo anelanelan'ny 24-25-26 Mey 2020 dia ampiharina ny curfew, manomboka amin'ny 06.00 ka hatramin'ny 24.00 amin'ny andro fialantsasatra ara-pivavahana sy nasionaly mandra-pahatongan'ny fifidianana "First Local Administration" izay noraisin'ny Filankevitra monisipaly Ankara Metropolitan. Ny fampiasana maimaim-poana ny serivisy fitateram-bahoaka nataon'ny EGO General Directorate momba ny serivisy, ny rafi-pitaterana sy ny fiaran-tariby… ”Araka ny fanapahankevitra, ny olom-pirenentsika izay voaroaka tsy afaka mivoaka amin'ny daty voalaza etsy ambony dia hahazo tombony amin'ny bus EGO izay hiasa eo anelanelan'ny 07.00-09.00 sy 16.30-20.00 mandritra ny fankalazana ny Ramadany.
ANKARAY sy Metro dia hikatona eo anelanelan'ny daty hampiasana ny curfew.
Ny fe-potoana farany fandehanana lamasinina farany ho an'ny tsipika M22, M2020, M1 ary M2 amin'ny zoma 3 Mey 4 dia omena eto ambany.
Ireo dia fitsangatsanganana farany ao ANKARAY dia mikasa ny hiala ao Dikimevi sy AŞTİ amin'ny 22.20. Ireo bus no hamita ny serivisy peratra farany aorian'ny fisetrahan'ny metro mpandeha farany.
Ahoana ny fomba fitateram-bahoaka any Istanbul mandritra ny 4 andro? Metro Metrobus sy Steamboats…
Ahoana ny fomba famerana ny fitateram-bahoaka amin'ny fomba mahazatra any Istanbul?
Ny Fivoriana am-pirahalahiana dia ho tokana mandritra ny andro 10
Ny seranam-piaramanidina dia ho malalaka mandritra ny Bayram mandritra ny Eskişehir
Mitokona mandritra ny telo andro ny fitokonan'i Alemaina
Ny fifamoivoizana dia ho afaka mandritra ny fialantsasatra ao Ankara
Fomba ahazoana ny fitateram-bahoaka any amin'ny curfew amin'ny faran'ny herinandro any Izmir
Ahoana no hisian'ny fitateram-bahoaka amin'ny faran'ny herinandro any Izmir?
Hanao ahoana ny fandaharana mipetraka amin'ny fitateram-bahoaka aorian'ny coronavirus?
ADARAY 10 Free mandritra ny andro
Fanipazana fampitandremana avy amin'ny TCDD: Aza manantona rails mandritra ny andro 10
Metrobus, Metro ary Steamboats dia hanompo mandritra ny 4 andro any Istanbul
Ny arabe mijanonana ao an-tanàna dia voaomana efatra andro ao Mersin!
Fampitandremana TCDD amin'ny lalan'ny fanaparitahana! Aza manantona 10 andro
Fandaharam-potoanan'ny metro Ankara
Nanomboka indray ny fiaran-dalamby tao Kiev taorian'ny roa volana
Taorian'ny Corona Camp, Caravan, hanao fanatanjahan-tena ivelan'ny fanatanjahantena ivelany
Manomboka any Turkey ny fiaramanidina fiaramanidina El-Al
Fitsidihana ny fankalazana amin'ny ESHOT nataon'ny Filoha Tunç Soyer
Mevlana Junction Traffic Signalization System nohavaozina
Ny Ben'ny tanàna Soyer dia mandinika ny tetik'asa Flamingo Nature Park
Hiaina any Afrika ny anaran'ny polisy martyr
Ben'ny tanàna Yüce: 'Nanomana lalana 2 ho an'ny tetikasan'ny rafitry ny jiro Sakarya aho'
Fijanonana haingam-pandeha ambony tsy hitsahatra amin'ny faritany Kocaeli sy Sakarya!
1925, Fikambanana Aeronautical Tiorka (Fikambanana fiaramanidina Tiorka) no natsangana
Ny El-Al Airlines miorina amin'ny Israely dia ajanony ny sidiny mankany Tiorkia 13 taona lasa izay, taorian'ny taona maro, hoy ny fanambarana nataon'ny orinasa, anisan'izany ny sidina fiaran'ny orinasa isan-kerinandro 2 [More ...]
BMC hanavao ny tanky 84 Leopard 2A4; Manohy ny fanavaozana fanavaozana ny fiara fiadiana lehibe (AMT) Tiorka ny tafika Tiorka amin'ny tafika. Amin'izao toe-javatra izao, taloha [More ...]
Fitateram-bahoaka amin'ny Bursa 50 Discounted
Fitateram-bahoaka ao Kocaeli maimaim-poana
Ahoana no hahatongavana any amin'ny hopitalin'ny tanànan'i Bursa?
Fitaterana an'olon-tsotra nandritra ny Bayram tany Izmir
Ahoana no fomba entin'ny fitaterana ny hoavy?
Internet 1GB Nandritra ny fetin'ny Ramadany avy any Turkcell, Vodafone ary Türk Telekom
Ahoana no hahatongavan'ny ora sidina IZBAN amin'ny andro firavoravoana?
Ny fandaharam-potoana fety any Istanbul Rail Systems